အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: February 2009
လူယုတ်ဆိုတာ ကြည့်ချင်ရင်လာကြည့် …ဒီလူ…
မိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း ကောင်းမှု ကို အားမထုတ်
တပါးသူတို့အားလည်း ကောင်းမှု ပြုခြင်းကို အားမပေး
ဖျက်ဆီးမှု အရေးကို သာရှေးရှုသူ
နောင်တွင် အပ္ပါယ် ငရဲသို့ လားကြကုန်၏။
သူအို သူနာ သူသေ ရဟန်း..
နိမိတ်ကြီးလေးပါးနဲ့မရဏလမ်း..
မသေဆေး ဘယ်သူပိုင်ဖူးလို့ လည်း..
မင်းတနေ့သေမှာပါ ဘဘ..
စင်ထက်ကနေ..သိပ်လည်း အပါးဝမနေပါနဲ့ 
ကောင်းမှုသာ လုပ်တဲ့ ဂုဏ်သတင်း..
အော့ နှလုံးနာစရာ.. နင့် စိတ်နှလုံးပုပ်..
သေရင် ငရဲမှာ သစ်ငုတ်ဖြစ်မဲ့ သူ..
မင်း ဂုဏ်သတင်းက ပုပ်နေပြီ။
မြန်မာ စာရင်းက မင်းကို ပယ်လိုက်သည်။
ရန်ကုန် နာရေးကူညီမှု အသင်း၏ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များကို စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်အတွင်း မထားရှိရန် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ဖိအားပေး သောကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
နိဗ္ဗာန်ယာဉ်တစီးကို ကိုယ်တိုင် မောင်းနှင်နေသော သရုပ်ဆောင် ကျော်သူ (ဓာတ်ပုံ - နာရေးကူညီမှု အသင်း)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက် မတိုင်မီက စတင်၍ ယခင်ထားရှိရာ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်ရှိ ဗြဟ္မ၀ိဟာရ ကျောင်းဝန်း အတွင်းတွင် ဆက်လက် မထားဘဲ ရန်ကုန်မြို့ပြင်ရှိ သင်္ချီုင်းများသို့ ပြောင်းရွှေ့ထားရန် ညွန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်လိုက် သည်ဟု နာရေးကူညီမှုအသင်း ဦးဆောင်သူ တဦးဖြစ်သည့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
နာရေးကူညီမှု အသင်းအနေနှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ နေ့စဉ် နိဗ္ဗာန်ယာဉ် ၁၆ စီးဖြင့် ဈာပန ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို သယ်ယူ သင်္ဂြီုဟ်ပေးနေရ ကြောင်းလည်း ဦးကျော်သူက ဆိုသည်။
အဆိုပါ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များ ထားရှိရန် အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခွင့်အား စည်ပင်သာယာသို့ တင်ပြတောင်းဆို ထားသည်ကို ယခုကဲ့သို့ ညွန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
“တကယ်လို့ သူတို့ အကြောင်းမပြန်ခင် ကျနော်တို့က အဆောက်အဦး ဆောက်လိုက်ရင် ကျနော်တို့ အသင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်နိုင်တယ်”ဟု ဦးကျော်သူက ဆိုသည်။
သင်္ဃန်းကျွန်း ဒေသခံတဦးကလည်း နာရေးကူညီမှုအသင်း အနေနှင့် အများပြည်သူအကြား ပိုမိုထင်ရှားလာမည် ကို အစိုးရက စိုးရိမ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ပြောသည်။
အစိုးရနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ နိုင်ငံရေးနှင့်လည်း ပတ်သက်ခြင်း မရှိသော နာရေးကူညီမှု အသင်းသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းငွေဖြင့် ၂၀၀၇ခုနှစ်အထိ နာရေး ကိစ္စပေါင်း ၆၀၀၀၀ ခန့် အခမဲ့ ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ အတွင်းက ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် ၁၈ နှစ် မြောက် ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားသို့ နာရေးကူညီမှု အသင်းမှ ဦးကျော်သူနှင့် စာရေး ဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် နောက်ပိုင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ လှုပ်ရှားမှုများကို အစိုးရ သတင်းစာများက ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုသည့် အပြင် အာဏာပိုင်များက အနှောင့်အယှက်များ ပေးခဲ့သည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:37 PM0comments Links to this post
အမေ မငိုစေချင်လို့ ..
တကယ်လို့ ထိုသူက နေရောင်ကိုခံစား..
ကြွက် ဂျပိုး ပိုးဟပ်
တံခါး အလုံပိတ်တဲ့ ထောင်..
သဲကြမ်း ရှရှရောနေတဲ့ ငပိ..
စပါးလုံးနိူင်းချင်းနဲ့ အောက်သိုးသည့် ဆန်..
ရေလုံပြုတ် ဆီမဲ့တဲ့ တာလပေါဟင်း..
လည်ချောင်းအောက်ဖက်ကို မဆင်းဖူး အမေ..
ယပ်ခတ်ဖို့ တောင် မလိုဖူး..
စားစရာနဲ့ ကို မတူဖူး..
ယုံကြည်ချက်တခုနဲ့ အမေ့ အိမ်ကို စွန့် 
ဥပဒေ တရားမျှတ ချစ်ကြည်နေထိုင်ရေး..
အော်ဟစ်မိလို့ တဲ့ ထောင်ချ..
ကျနော့ ရှေ့ မှာ..
အမေ့ မျက်ရည်သာကျ လာမပြပါနဲ့ ..
အမေ့ အိုစာမင်းစာ အထုတ်ကိုခွဲ
ရှိစု မဲ့စု ကြိုးစား
ပါဆယ်ပို့ တဲ့ ငပိကြော်.နဲ့ စားစရာ..
အမေရယ်..ခဏခဏ မလာပါနဲ့ ..
အစားအသောက် ကောင်းပါတယ် နဲ့ 
အစာ စားမရ..အစာအိမ် ရောဂါဖြစ်..
မသန့် စင်ရေက .အသည်းရောဂါဖြစ်..
အမေကို့အပူမကပ်ချင်ပေမဲ့..
ထောင်ဝင်စာ သားကိုလာတွေ့ တဲ့ အမေ..
“ အမလေး လူလေး..သားကလေးရယ်
စာရွက်ကလေးတွေ ဝေမိတာနဲ့ 
မတရားအသင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပုဒ်မ ၁၇/၁
ကျတာက ထောင်ဒဏ်လေး ၂ နှစ် ပါ.ကွယ်..
ဖင်လှည့်ခေါင်းလှည့် ဒီ အချိန်ကလေးထဲ..
ထောင်ဝင်စာလေးဘဲ တွေ့ ခွင့်ပေးပါ..
ထောင်မှုး ကျေးဇူး..ကျမ အထူး နားလည်ပါတယ်..
ကျမ ဘိုးဘွားပိုင်လယ်ပွဲ ကလေး ကိုရောင်း..
ကုန်သမျှ ကျမ ကျခံ..
သားမသေအောင် ကျမ ကျွန်ခံဘဲ ဆပ်ဆို ဆပ်ပါရစေ ”
အမေအို..ငိုယို ခြေဖက် တောင်းပန်ပေမဲ့..
ပြစရာ ဆရာဝန်မလိုဖူး..တဲ့ ဗျာ..
အမေ ပေးတဲ့ ဆေးနဲ့အစာ..
လုယက်ကာ သူတို့ ခိုးဝှက်..
သား ဘာမှ မရ ရပါဖူး..
အမေ့ ရဲ့ ပူပင်သောကမျက်ရည်..
မလာပါနဲ့ ဆိုလည်း .သူမနေ..
အမေ ပို့ တာလည်းကျနော်မရ..
အမေ့သောကကို ကျနော် ဘယ်လိုငြိမ်းရမလည်း..
အမေ့ ဗျာပါဒ ကို ကျနော် ဘယ်လိုငြိမ်းရမလည်း..
ကျနော့ကို အမေ မေ့ပါစေ..
အမေရယ်.. ကျနော့ ကိုမမုန်းပါနဲ့ ..
အမေရယ်.. ကျနော့ ကိုအပြစ်မမြင်ပါနဲ့့..
ကျနော့ ဘ၀နဲ့ စတေး..
တိုင်းပြည် အတွက် ကျနော် ရာဇ၀င်ရေးခဲ့တယ်..
အသက်က ၃၀ ကျော်ကျော်..
မသဒ္ဓါ ( ၂။၂၅။၂၀၀၉)
ကောင်းရာသုကတိလားပါစေ..ကိုမောင်စန်း ကျမတို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။
Wednesday, 24 December 2008 18:52 ကိုစိုး
အဆိုပါ အသက် ၃၀ ကျော် ၀န်းကျင်ရှိ ကိုမောင်စန်းသည် ၎င်းတွင်ခံစားနေရသည့် အစာအိမ် ရောဂါနှင့် အ သည်းကြီးသည့် ရောဂါများအတွက် ထောင်အာဏာပိုင်များကို ဆေးဝါးကုသခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုရာ ခွင့်မပြု သောကြောင့်ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့ကသေကြောင်းကြံစည်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပဲခူးမြို့ရှိ ကိုစန်းမောင်၏ မိသား စုနှင့် နီးစပ်သူ တဦးကပြောသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာ ပဲခူးထောင်ထဲက အိမ်သာထဲမှာ သူ့ကိုယ်သူကြိုးဆွဲချပြီး သေ သွား တာ၊ သူက ထောင်ထဲမှာပဲ အစာအိမ်ရောဂါ၊ အသည်းကြီးတဲ့ ရောဂါဖြစ်နေတယ်၊ ရောဂါကလည်း တော် တော်ဆိုးနေတယ်၊ ၁၃ ရက်နေ့က သူ့မိသားစုတွေ လိုက်လာပြီး ထောင်ဝင်စာ တွေ့တဲ့အချိန် ဆေးကု သခွင့်ပြု ဖို့တောင်းတာ ခွင့်မပြုဘူးတဲ့၊ မိသားစုက ပါလာတဲ့ ဆေးဝါး ပစ္စည်းတွေနဲ့ စားစရာတွေကိုလည်း အထဲကို ပို့ပေး ဘဲ အပြင်မှာပဲသိမ်းထားတယ်တဲ့၊ အဲဒီတော့ သူက ကျန်းမာရေးကလည်း ဆိုးဝါးနေတာရယ်၊ မိသားစုနဲ့လည်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံခွင့် မရတာရယ်၊ အဲဒါကြောင့် အခုလိုကြံစည်သွားတယ်လို့ သိရတယ်”ဟု မိသားစု နှင့် နီး စပ်သူကပြောပြသည်။
ယင်းကိုမောင်စန်းသည် ပဲခူးတိုင်း ရွှေကျင်မြို့မှဖြစ်ပြီး မတရားအသင်းနှင့် ဆက်သွယ်သည့် ပုဒ်မ ၁၇/၁ ပုဒ်မ နှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ကျခံနေရသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ပဲခူးထောင်မှာ အခုလိုဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်တာ အခုတလော ၂ ကြိမ် ရှိသွားပြီ၊ ဟိုတလောကလည်း တိုက်ကြီးက တယောက် အရိုက်ခံရတယ်၊ တော်တော်နာတယ်၊ အခု ရွှေကျင်က တယောက်က မကျန်းမာလို့ ဆေးကုခွင့် တောင်းတယ်၊ မရတဲ့အခါကျတာ့ အိမ်သာထဲမှာ သူ့ ပုဆိုးနဲ့သူ ကြိုးဆွဲချသေသွားတယ်”ဟု ဦးမြတ်လှက ပြော ဆို သည်။
ယင်းပဲခူးထောင်တွင် ယခင်က အကျဉ်းသား ၁၀၀-၁၅၀ ခန့်သာ ထားရှိသော်လည်း ယခုမူ ၄၀၀-၅၀၀ ခန့်ရှိ သည် ဟု ကြားသိရကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“အခုတလောမှာရောက်လာတာ ကြားရတာကတော့ ၁၂ ဦး ရောက်တယ်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ လက်ဦး က ရွှေကျင်ကပဲ အန်အယ်လ်ဒီ ကနေ ထောင်ကျနေတဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဘိုကြီး ဆိုတာရယ်၊ အဖွဲ့ဝင် ဖေတင် ဆိုတာ ၂ ယောက်ရှိတော့ ၊ အခု ၁၄ ယောက်ရှိသွားပြီ၊ မန္တလေးကလည်း ပါတယ်လို့ပြောတယ်”ဟု ဦးမြတ်လှ က ပြော သည်။
ယခုလအလယ်ကလည်း ပဲခူးထောင်တွင် ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသော တိုက်ကြီးမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(အန်အယ်လ်ဒီ)မှ ကိုအောင်ကျော်ဦးသည် ထောင်အာဏာပိုင်များ၏ ရိုက်နှက် စစ်ကြောသည့် ဒဏ်ကို ပြင်းထန် စွာခံစားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြသည့် ကိုထင်ကျော်တို့အဖွဲ့မှ ကိုဖိုးတုတ် ခေါ် ကိုခင်မောင်ချိုကိုလည်း ပြီးခဲ့ သည့် ၂၂ ရက်နေ့က ရန်ကင်းမြို့နယ် တရားရုံးက ပုဒ်မ ၁၃/၁ အရ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် အမိန့်ချ လိုက်ကြောင်း ထောင်ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:04 AM 1 comments Links to this post
အဖြူ မိန်းမများ အဖြူများကြိုက်၏။
သူ့ လူမျိုးချင်း သူကြိုက်၏။
မြန်မာတို့အရှက်ရ၏။
Come on.. ဦးရဲမြင့်အောင်
သန်းရွှေ အတွက် လျှောက်ဟောင်
ရှက်လို့ တောင် လဲသေချင်မိပါတယ်။ သံတမန်နယ်က လူတန်းစား..ဒီလောက် သိမ်ဖျင်း စကားပြောတတ်တာ။ လူအရည် လူ့ အခွင့်အရေး..ဘာမှနားမလည်တဲ့ မြန်မာ..ဗလွတ်ရွတ်တ။ အရည်အဖတ်မရှိတဲ့အရာကိုဆိုတတ်သော လူမျိုးဟာ..
ကိုယ်ပေါင်သာနာနာထောင်းမိပါရဲ့..သေဟဲ့ သေဟဲ့ ငါလည်း လေ..ဗမာဟဲ့…
မြန်မာနိုင်ငံက လူနည်းစု မွတ်ဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လုို့ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများက ဆွေးနွေးကြဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အချိန်ပဲ ဟောင်ကောင်ရှိ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကောင်စစ်ဝန်ရုံး အကြီးအကဲ ဦးရဲမြင့်အောင်က ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘီလူးလို အရုပ်ဆိုးတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မြန်မာတွေ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေလည်း မဟုတ်ကြဘူး၊ ရိုဟင်ဂျာတွေက အသားညိုမှောင်တယ်၊ မြန်မာတွေက အသားဖြူ ချောမွေ့ပြီး ကြည့်ကောင်း ရုပ်ချောတယ် လို့ ဟောင် ကောင်ရှိ နိုင်ငံခြား မစ်ရှင်ရုံးများနဲ့ စာနယ်ဇင်းများသို့ စာရေးအကြောင်းကြားတဲ့အထဲမှာ ဦးရဲမြင့်အောင်က အဲဒီလို ထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:06 AM2comments Links to this post
အဖေ့ နာမည်မှ မပါ..
မြန်မာ့ သမိုင်းကို ဘယ်လိုရေးကြမလဲဟေ့
ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးတဲ့နေ့က အာဇာနည်နေ့ 
အောင်ဆန်း (သို့ မဟုတ်) ငယ်မည်မောင်ထိန်လင်း
နှစ်စဉ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက်
ကလေးများနေ့ မှာ ကဗျာတွေရွတ်။
မုံ့ စားပြိုင်ပွဲက ပျော်စရာကလေး။
ကျမတို့ ရပ်ကွက်ထဲ တသဲသဲ..
အဖေ့ ဂုဏ်ရည် ချီးမွမ်းတဲ့ပွဲ။
သူ့ ကျွန်မခံချင်တဲ့ ရှေ့ နေသား
၁၉၁၅ နတ်မောက် မှာ ဖွား
တပြည်လုံး န၀မစွဲတဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ သတ္တမတန်း စာမေးပွဲ
မြန်မာ၊ပါဋိ နှစ်ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရတဲ့ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ အမှုဆောင်
အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာ့ ကလောင်
ဒုတိယ ကောလိပ်သပိတ် (၁၉၃၆)၊
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကိုအောင်ဆန်း
ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး သခင်အောင်ဆန်း
၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံကို ကူညီအားပေးခဲ့သူ
ကွန်မြူနစ်ပါတီ သမိုင်း၊ ဖဆပလ သမိုင်း၊
ကိုအောင်ဆန်း၊ သခင် အောင်ဆန်း၊ ဗိုလ်တေဇ။
သူသည်သာ တပ်မတော်၏ ဖခင်၊
သူသည်သာ လွတ်လပ်ရေး၏ ဖခင်၊
အခု စစ်အစိုးရ နအဖ..
ရုံးနဲ့ ကျောင်းက အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံကိုဖြုတ်၊
ဂူဗိမ္ဗာန် ကို စစ်သားသချိုင်းလုပ်
ကျမတို့ အားလုံး သမိုင်းပေးတာဝန်ပါ။
မသဒ္ဓါ ( ၂။၁၂။၂၀၀၉)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:16 AM0comments Links to this post
ဘာ ဘာ ဘယ်လိုဆရာ..
ဘာကြောင့် ဖြစ်သလည်းဆရာ ဆိုတော့
ဘယ်မှာရောင်းလည်း ကျူပ် မသိ..မယ်ဖော့ လည်း နုံအအ မရှိတဲ့ သတ္တိ။
ကျူပ်မွေးတာ မဆလ။ နအဖ လက်ထက်..
ကျူ ပ် မတတ်နိုင်ပါဖူး။.
အခုတော့ ကျူပ်နဲ့ မယ်ဖော့..
သတင်းစာထဲ ဘာဖွင့်ပွဲ ညာဖွင့်ပွဲ
အပြစ်စင်တဲ့ လူ ဘယ်လောက်များ..
အပြစ်မဲ့ စွာ. AIDS ကူးစက်ခံရသူများအတွက်..ကြေကွဲစွာဖြင့်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:21 AM0comments Links to this post
ပြန်လာခဲ့မယ်..တနေ့ နေ့ ။
တမတ်သား မချန်နဲ့ တဲ့
ကျနော့ အမေ့ဝမ်းထဲ နေခိုက်
ငတ်တလှည့် ပြတ်တလှည့် အစာ
အသက်တွေ ရှူ မ၀ဖူး..
ချစ်တဲ့ အမေ အတွက်
ကျနော် ခဏ အပြင်ထွက်ပေးတယ်။
ကျနော် အမေ့ အနားမှာရှိတယ်..အားမငယ်နဲ့ 
အဖေနဲ့ အမေ အတူတူနေတဲ့ အချိန်ကြ..
မကေသီအောင်နဲ့ ကိုထွန်းထွန်း အတွက်..
အာဇာနည် မျိုးဆက်ဟာ သေရိုး မရှိဘူး..မောင်ငယ်ညီမငယ်ရဲ့ မမွေးရသေးသော ကလေးငယ် ဝိညာဉ် အပြင် တနေရာရာ မှာ…ရှိနေပါတယ်..
တနေ့သူပြန်လာမှာပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:12 AM3comments Links to this post
သမီးငယ်သို့ဗာလင်တိုင်းကဗျာတပုဒ်။
ရှက်သွေးစိုတဲ့ သမီး အမေရဲ့ပါးပေါ်က
သမီးကို ဝယ်ပေးချင်တဲ့ ..
ဆိုင်ထက် စင်ပေါ်မှာ စောင့်နေဆဲဘဲ။
ချစ်သူများအတွက် အမှတ်တရနေ့ ..
မနှစ်က ၂၀၀၈ ဗာလင်တိုင်းမှာ..
အဖေ့ အချစ်ကို ပြခဲ့တယ်..
ပြည်သူများရဲ့ အသဲနှလုံးက ဒဏ်ရာ..
၀င်စားဝိညာဉ် နဲ့ ရေးတဲ့ ကဗျာဆရာ..
အမှန်ကို ကဗျာ ရွတ်ဆိုရေး
“ အာ နာ ရူး မှုး ကြီး သန်း ရွှေ..”
ပြခဲ့တဲ့ အဖေ့ ဘ၀နဲ့ သက်သေ..
မြန်မာကို ချစ်တဲ့ အဖေ့ အချစ်။
သမီးရယ် သ၀န် မတိုပါနဲ့ ။
မိသားစုကို မငဲ့ဖူး အပြစ်မတင်ပါနဲ့ ။
နှင်းဆီပွင့်ချပ် ပေါ် တင်တဲ့ ဆောင်းနှင်းစက် ထက်..
အဖေ့ ထောင် တမင်းကြမ်းက ပိုကြမ်းတမ်းတယ်။
တ ကျွိ..ကျွိ နဲ့ 
နေနေတာ စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ ..
အဖေ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တာ အပြစ်မမြင်နဲ့ ..
တနေ့သမီးကြီးလာရင်..
အဖေ ဘာကို ဆိုလိုတာ သိမှာပါ..
အဖေ ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်တာ သမီးနားလည်လာမှာပါ..
တချို့က ကောင်းတာ လုပ်ဖို့ ရှက်ကြတယ်။
တချို့က မကောင်းတာ လုပ်ဖို့ ရှက်တတ်တယ်။
တချို့က ကိုယ်အတွက်ဘဲ သိတတ်တယ်။
တချို့က သူများအတွက်ကို ကြည့်တတ်တယ်။
တချို့ လူတွေက တသက်လုံး အယူ ဘဲ ရှိတယ်။
တချို့ လူတွေက တသက်လုံး ပေးဖို့ ဘဲသ်ိတယ်။
အဖေ ကတော့ ဂုဏ်ယူတယ်..
ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ညစာစားတဲ့ လူသား။
သမီးလေး ရွန်းစိမ့်စိမ့် ရဲ့ အဖေ။
အချစ်များစွာနဲ့ ကဗျာရေးသူ "စောဝေ"
ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေရဲ့ သမီးငယ် ရွန်းစိမ့်စိမ့် အတွက်။
သမီးငယ်လည်း အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို...သမီးရဲ့ ဖခင်အတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ တနေ့ နေ့ မှာ သမီးရဲ့ အိမ်ကို သမီး ဖေဖေ ပြန်လာမှာပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:39 AM0comments Links to this post
အပျိုရည်ပျက်သော သတို့ သမီး..
တွေ့ ဆုံတဲ့ မေခရယ်..မလိခရယ်။
အပျိုဖြန်း အလှ နဲ့ဧရာဝတီ.
သစ်နဲ့ဝါးဖောင်..
သွေး ရင်ပြင်နဲ့ မြစ်..
မေးတင် အိပ်ရာ မြစ်..
ရင့်ကျက်တဲ့ အလှ ဧကရီ။
သီးနှံ အများ ပေါကြွယ်များခဲ့..
ရေထွက် အစာ ကုန်းထွက်အစာ
မြောက်မှ တောင်ဆီ ငြိမ့်ငြိမ့်စီးနေဆဲ..
ညစ်ထပ်ထပ်နဲ့မြစ်ရေ..
ပတ်ဝန်းကျင် အလှ ပျက်သုန်း..
သင်လည်းဘဲ မြက်ဘ၀နဲ့ မြေဇာ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:55 AM0comments Links to this post